Football Khabar » संकटमा मेस्सी : दुई वर्षको प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने !
संकटमा मेस्सी : दुई वर्षको प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने !
यदि मेस्सी सो मुद्दामा दोषी ठहर भएर दुई वर्षको प्रतिबन्धमा परे उनले सन् २०२० मा आयोजना हुने कोपा अमेरिका गुमाउनेछन् । त्यसैगरी, सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकपका छनौट खेलसमेत मेस्सीले खेल्न पाउनेछैनन् ।
मेस्सी अर्जेन्टिनाका सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् । उनले देशका लागि कूल ६८ गोल गरेका छन् । यसपटकको कोपामा उनले कूल १ गोल गरेर १ गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए । अर्जेन्टिना फाइनलमा आयोजक ब्राजिलसँग २–० ले हारेर उपाधि होडबाट बाहिरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २३ असार २०७६, सोमबार ०३:५८